Indlu ye-Swan e-Brecks ene-Private Hot Tub - I-Airbnb
Indlu ye-Swan e-Brecks ene-Private Hot Tub
Leli kotishi elihle liyindawo yokuthula, ebekwe eBrecks enhliziyweni ye-East Anglia, esendaweni enhle yokuhlola iNorfolk neSuffolk. Ihora nje ukuya eSouthwold, Holkham, noma eCambridge eneSnetterton Race Track ngamamayela amahlanu. Ukufinyelela kalula eNorwich, Bury St Edmunds nase-Ipswich. Iklanywe kahle futhi inefenisha, i-Swan Cottage ilala ezimbili; inendawo yokupaka yangasese, ithala elingaphandle, i-BBQ, ubhavu oshisayo, ukufinyelela echibini elishisayo elingaphakathi futhi eliseduze nezindawo eziningi zasemaphandleni kanye nokuhamba kwehlathi.
Le mpahla yakudala eguqulelwe kahle, ebekwe emagcekeni e-Hill House, ihlinzeka ngendawo yokuhlala kanokusho evalekile enakho konke okudingayo ngeholide elihle. Idizayinelwe ukudala umoya wokuphumula othokomele ophilayo ovulekile ogcwele ukukhanya kwemvelo.
UHLUKO LOKUTHI INTENGO IHLANGANISA:
Intengo ihlanganisa ngokugcwele futhi ihlanganisa izinzuzo ezilandelayo:
- Lapho ufika uzothola iphakethe elamukelekile elihlanganisa itiye, ikhofi, ushukela nebhodlela lewayini ongakujabulela.
- Ukufinyelela kokushisayo kwangasese ngaphakathi kwezizathu ze-Swan Cottage (ethafeni, phambi kwekotishi) ukuze kusetshenziswe KUPHELA izivakashi ze-Swan Cottage. Uzokwazi ukuphumula kuleli bhavu elishisayo elimnandi ngesikhathi uhlala nengilazi yewayini ngaphandle kokuphazamiseka.
- Ihora lokuthopha lokubhukuda indawo noma amabili kuye ngokuthi ubude bendawo yokuhlala.
- Ilineni elihle, izingubo ezithambile, ezinethezekile, namathawula okugeza konke kuhlinzekwe.
INKETHO YOKUKHANGELA I-SWIMMING POOL:
I-pool iyatholakala ukuze ujabulele.
Uma uhlala ubusuku obu-3 sikunikeza indawo yokubhukuda eyihora elingu-1 ngesikhathi uhlala, uma uhlala ubusuku obu-4 sikunikeza izindawo zokubhukuda zamahora angu-2 ngamunye. Sicela uqaphele ukuthi akukho ukubhukuda kukodwa okuvunyelwe.
Igumbi lokulala, lifakwe umbhede olingana nenkosi futhi lithuthukiswa futhi ngokukhanya okuthambile nendawo yokugcina izinto. Igumbi lokugezela lesimanje eliwubukhazikhazi ligqamile ngempela - elinokugeza neshawa, izingubo zokugqoka, amathawula amakhulu athambile kanye nezinsipho nokhilimu kaPlum ne-Ashby.
IKHISHI NESITTING ROOM
Ikhishi elivulekile, indawo yokudlela, indawo yokuhlala ihlome ngokuphelele ngakho konke ongakufuna - ikhaya langempela elivela ekhaya (futhi uma kukhona okudingayo okungekho, sizozama ukukunikeza). Igumbi lokuhlala linikeza usofa othokomele lapho uchitha amahora ufunda noma ubukele ama-DVD. Ukushisa okungaphansi kugcina indawo yokuhlala ithokomele ezinyangeni zasebusika. Ifakwe i-WIFI nesipika se-Bluetooth.
Ama-DVD, izincwadi nomagazini ayatholakala, kodwa adinga ukucelwa.
Ithala elingaphandle elikhethekile liyindawo efanelekile yesidlo sakusihlwa se-al fresco esikhanyiselwe ngamakhandlela ngemva kokuhlola usuku olude. Ethaleni uzothola i-BBQ netafula nezihlalo, izihlalo zokhuni ezimbili ezikhululekile ze-Adirondack kanye nobhavu oshisayo.
Kungakhathaliseki ukuthi uchitha usuku ubuka indawo, uhamba ezindleleni zasogwini noma ehlathini elinomlingo eliseduze, ayikho indlela engcono yokuqeda usuku kunokuthatha ingilazi yewayini ngaphandle, ubuka izinkanyezi, noma uzipholele kubhavu oshisayo.
Izihlalo zepikiniki, amapuleti kanye nesikhwama esipholile zikhona, kodwa zidinga ukucelwa.
4.96 · 89 okushiwo abanye
Cabanga nge-Brecks futhi akufanele nje uhlanganise indawo yayo yasemaphandleni emangalisayo ye-heath, ihlathi namapulazi; kodwa futhi kufanele uthokozele ubumnandi bokudla nesiphuzo sayo sekhwalithi ephezulu esivela kuleyo larder yemvelo ehlukahlukene. I-Brecks inamadlelo aluhlaza, umhlaba olimekayo, amahlathi kanye nezindlela zomfula ezinikeza imvelaphi yohlu olumangalisayo lokudla okumangalisayo - izinhlanzi ezintsha, inyama evela emfuyweni yendabuko efana nezinkomo ze-Redpoll nezimvu ze-Norfolk Horn, futhi okubaluleke kakhulu, umdlalo wayo ocebile. .
Jabulela izinhlobonhlobo zemikhiqizo yobisi ehlukile - ushizi ophuma kubisi lwendawo, ukhilimu, iyogathi no-ayisikhilimu. Ungakhetha ohlwini lweziphuzo zasendaweni - i-ales, i-cider, i-whisky, amajusi ezithelo ezikhethekile namawayini.
Baningi abakhiqizi, abagqugquzelwe yizithako zasendaweni, basungule amabhizinisi aphumelelayo. Uzothola le mikhiqizo yasendaweni emnandi itholakala kabanzi ezitolo zasemapulazini ezigcwele kahle, izimakethe zabalimi kanye nezitolo ezikhethekile zendawo emadolobheni amaningi nasezigodini. Izindawo zokudlela eziningi namashibhi konke kuziqhayisa ngekhwalithi ephezulu yokudla kwazo - futhi konke kusendaweni.
Ngenkathi uhlala e-Brecks, futhi ubekwe endaweni enhle yokuvakashela ezinye izingxenye ze-East Anglia; lapha e-East Harling ungaphezudlwana kwehora ukusuka ogwini lwaseSuffolk, noma ogwini lwaseNorth Norfolk, eSandringham noma eCambridge. Ungakwazi ubumba uzungeze idolobha lasendulo i-Bury St Edmunds, noma ugqugquzelwe ngokuwina umklomelo uPeter Beales Roses nezingadi zabo ezinhle. Jabulela isidlo sasemini eside e-Wyken Vineyard, bhukha usuku e-Center Parc's Spa, noma vele uzinike isikhathi sokuhamba emaphandleni athakazelisayo.
Abanikazi bahlala eduze futhi bazokwamukela lapho ufika futhi bakhona ukuze baphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo, ngaphandle kokuthi uzimele ngokugcwele. Kwesinye isikhathi siyahlangana ekushayeleni futhi sibambe iqhaza ezivakashini futhi nezinja zethu zingase zikhonkothe ukuze zithi sawubona, kodwa zizokujabulela ukukuhlangabeza!!
Njengoba usondela eduze nokuhlala kwakho e-Swan Cottage, uzothola i-imeyili yokwamukela enemibandela Yokubhuka Nezikhombisi-ndlela enamathiselwe ukukusiza ngokupakisha nokuhlela ukuhlala kwakho.
Abanikazi bahlala eduze futhi bazokwamukela lapho ufika futhi bakhona ukuze baphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo, ngaphandle kokuthi uzimele ngokugcwele. Kwesinye isikha…